News 18 Nepal || रातारात बढ्ने होइन शरीरमा इम्युनिटी, अपनाउनुहोस यस्तो विधी
काठमाडौं । कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीको वर्तमान समयमा इम्युनिटी विषय चर्चाको केन्द्रमा छ । मानिसहरुले आफ्नो इम्युनिटी बढाउनका लागि अनेक विधि र प्रयत्नहरु गरेका छन् । इम्युनिटी यस विधि वा वस्तुले बढ्छ वा त्यस विधि वा वस्तुको प्रयोगले घट्छ भन्ने प्रचार गरिएका छन् । यसमध्ये कतिपय सत्य पनि होलान् भने कतिपय भ्रामक ।
इम्युनिटी वृद्धि गर्ने, गराउने होडमा धेरैले राम्रै कमाइरहेका पनि छन् । केहीले सत्यतथ्य नबुझेर अनेक थरी प्रयत्न गरी आफ्नो स्वास्थ्य पनि बिगारेको पाइएको छ । यहाँसम्म कि रक्सी खाएर इम्युनिटी बढ्छ भन्ने हल्लासमेत चलाइएको छ । इम्युनिटी रातारात बढ्दैन । यो शरीरको धेरै कुरामा निर्भर रहेको हुन्छ ।
कुनै औषधि वा विधिले चमत्कारी शैलीमा पनि इम्युनिटी बढ्दैन । इम्युनिटी बढ्नु, बढाउनु भनेको शरीरमा निहित इम्युनिटी बढाउने प्रणालीले छरितो कार्य गर्नु हो । शरीरको कुनै प्रणाली स्वतन्त्र हुँदैन । एउटा प्रणाली अर्को प्रणालीसँग जोडिएको हुन्छ । शरीरको कुनै एउटा प्रणालीमा समस्या छ भन्नुको अर्थ अन्य प्रणाली पनि समस्यामा तानिनु हो ।
अतः इम्युनिटीको आधारभूत कुरा भनेको शरीरका सबै प्रणाली स्वस्थ राख्नु हो । सारमा स्वस्थ शरीर नै सबल इम्युनिटीको जग हो । इम्युनिटी भनेको शरीरको एक विशेष खालको क्षमता वा शक्ति हो । यसले शरीरलाई रोग लाग्नबाट बचाउँछ वा बचाउने प्रयास गर्दछ । साथै शरीरमा लागिसकेको रोगविरुद्ध शरीरभित्रै लड्ने शक्ति पनि इम्युनिटी नै हो ।
इम्युनिटी बढ्नु वा बढाउनुको अर्थ रोग लाग्ने कारणलाई रोक्नु वा छेक्नु हो । हरेक मानिसको इम्युनिटी फरक हुन्छ । दुईजना व्यक्तिलाई एउटा रोगको सम्पर्कमा ल्याउँदा, एउटामा रोग लाग्न सक्छ भने अर्कोमा नलाग्न सक्छ । किनकि ती दुई व्यक्तिमा रोग–प्रतिरोधात्मक क्षमता फरक हुन्छ ।
त्यस्तै हरेक लिंग, उमेर, जात, धर्म, एवं प्रजातीमा पनि फरक–फरक रोग र इम्युनिटी रहेको हुन्छ । भौगोलिक हिसाबले पनि मानिसहरुमा इम्युनिटी फरक हुन्छ । सुश्रुत संहिता सूत्रस्थानमा ‘मानव शरीर दोष, धातु र मलले बनेको हुन्छ, मानव शरीरमा हुने धातु, अग्नि, मल आदिको सन्तुलन र आत्मा एवं मनको प्रसन्नता नै स्वास्थ्य हो’ भनिएको छ ।
कोरोनाविरुद्ध व्याधिक्षमत्व वृद्धि कसरी गर्ने ?
सबेरै उठेर नित्यकर्म सकी कम्तीमा ३० मिनेट व्यायाम गर्नुपर्छ । बिहान सधैँ १५ मिनेट सूर्यकिरणको स्नान गर्नुपर्छ, जसले शरीरमा आवश्यक भटामिन ‘डी’ आपूर्ति गराउँछ । बिहान खालि पेटमा फलफूल वा यसको रस अथवा घिउकुमारी, जमरा, गुर्जो, अमला, तुलसी आदिको काढा वा रस ५० देखि १०० मि.लि. पिउनुपर्छ ।
ऋतु अनुसार मानवशरीरको पाचक अग्निको शक्ति घट्ने/बढ्ने हुनाले मौसमअनुसार सागसब्जी वा फलफूल आहार गर्नुपर्छ । एकै खालको खानपिनको बानी पार्नुहुन्न । खाना खाने बेलामा मोबाइल चलाउने, टिभी हेर्ने, कुराकानी गर्ने जस्ता कार्य गर्नुहुँदैन । हरेक गाँस २०–३० पटकसम्म चपाएर निल्ने गर्नुपर्छ ।
दैनिक २ देखि ३ लिटर पानी पटक–पटक गरी पिउनुपर्छ । सकेसम्म मनतातो पानी पिउनु राम्रो हो । तातोपछि लगत्तै चिसो वा चिसोपछि लगत्तै तातो सेवन गर्नुहुँदैन । दिसा, पिसाब, भोक, प्यास, निद्रा आदिको वेग रोक्नुहुँदैन । दैनिक ६ देखि ८ घण्टा सुत्नुपर्छ । तारे–भुटेको, अधिक चिल्लो, पाकेटबन्द तयारी खाना वा अधिक मैदायुक्त खाना छोड्नुपर्छ ।
बासी वा फ्रिजको खाना पनि सकेसम्म उपयोग गर्नुहुँदैन । बेसार, अदुवा, लसुन, प्याज, जिरा, मरिच, दालचिनी, तेजपात आदि मसलाको गुण नष्ट नहुने गरी भोजनमा प्रयोग गर्नुपर्छ । मह, घिउ र दूधको इम्युनिटी वृद्धिमा अधिक भूमिका हुने हुनाले यी चीज निश्चित मात्रामा दैनिक सेवन गर्नुपर्छ ।
उपवासले शरीरको पाचक अग्निबल बढाउने, धातु निर्माण प्रक्रियालाई छरितो बनाउने र शारीरिक मलहरुको सम्यक् निष्कासन गरी इम्युनिटी बढाउने हुँदा हप्ताको एक दिन उपवास गर्नु हितकर मानिन्छ । धूमपान–मद्यपान नगर्नु, अधिक मात्रामा चिया–कफी नपिउनु, शाकाहार भोजन गर्नु शरीरका लागि सर्वथा राम्रो हुन्छ । दैनिक ३० देखि ४५ मिनेट ध्यान गर्नुका साथै सकारात्मक सोच एवं सद्भावका साथ पारिवारिक जीवनयापन गर्नुपर्छ ।
नेपालमा आज बिहिबार कुन जिल्लामा कति कोरोना संक्रमित थपिए ?